Mibairo yedu kudzikisira mitengo yekutengesa, inoshandira mari timu, yakasarudzika QC, mafekitori akasimba, emhando yepamusoro masevhisi eZvigadzirwa, ,,, "Passion, Kutendeseka, Ruzha sevhisi, Keen kubatana pamwe neBudiriro" ndizvo zvinangwa zvedu. Isu tiri pano tichitarisira shamwari pasi rese! Tave ruzivo mugadziri. Kumhanyisa ruzhinji rwezvakakosha zvitifiketi zvemusika wayo weZvekugadzira, Tinokugamuchira iwe kuti ushanyire kambani yedu & fekitori uye yedu showroom inoratidza zvigadzirwa zvakasiyana siyana uye mhinduro dzinozadzikisa zvaunotarisira. Zvichakadaro, zviri nyore kushanyira webhusaiti yedu. Vashandi vedu vekutengesa vanoedza nepavanogona napo kukupa iwe neakanakisa masevhisi. Kana iwe uchizoda rumwe ruzivo, ndapota usazeze kutibata nesu kuburikidza neE-mail, fakisi kana runhare.
Bhuku Chimiro Imbwa Imba AT2001 inoshandisa yakapetwa dhizaini dhizaini, inogona kukurumidza kuvhurwa kuita tende dhizaini imbwa imba. Izvo hazvisi nyore chete kuchengetedza kumba asiwo zvakare nyore kuita. Yakanaka dhizaini dhizaini, inogona kutumirwa mumasekondi matatu kuti igadzire yakavanzika nzvimbo yezvipfuyo. Simudza hwaro kuti udzivise mhuka dzinovaraidza kubva mukubata hunyoro pasi, hunyoro-chiratidzo uye hunyoro-chiratidzo. Mushure mekupetwa, iri muchimiro chebhuku, ine mubato unotakurika, uri nyore kufamba.
Multifunctional Trolley Pet Bhegi
Multifunctional Trolley Pet Bhegi inoshandisa mhepo nyowani kutenderera mweya muhombodo yechipfuwo, uye iine yakaipa ion kuti ibvise hwema, ichipa mhuka dzinovaraidza uye varidzi vezvipfuyo neruzivo rwekufamba zvirinani. Mabhandi epafudzi ane 50 mm upamhi, izvo zvinoita kuti mapendekete awedzerwe zvakaenzana uye zvive nyore kutakura. Musuwo webhegi unoshandisa isina-kutsemuka chengetedzo yemusuwo, iyo inogona kukiya musuwo nekiyi imwe kudzivirira mhuka dzinovaraidza kuti dzisvetuke netsaona. Pazasi pehombodo yakanyatsogadzirwa nemakoramu kuona kuti bhegi iri rakatsiga uye rinopokana nekutendeuka kana rikaiswa pavhu rakatsetseka. Mukugadzirwa kwegumbo, isu tinoshandisa PU mavhiri, ayo anogona kunyatso kudzora kukatyamadza kudzikisira kusagadzikana kwechipfuva panguva yekudhonza, asi zvakare inogona kuramba kukakavara uye kuwedzera hupenyu hwebasa.
PD525 Kudzidzisa Imbwa Collar ine Remote maficha mune-yakavakirwa tochi, matatu ekudzidzira mabasa uye kugona kwekubatanidza kusvika kumatatu makorari kune kure. Inogona kubatsira kubata nemamwe maitiro asingadiwe embwa, senge
l Kudhonza pane lead
l Midziyo yekutsenga
l Kuruma / kutsemura
l Kutandanisa vanhu pafenzi
l Kuratidza hukasha
PD525 Kudzidzisa Imbwa Kola neRemote inoshandisa matatu mashandiro ezwi, kutetemera uye kumira mushe kuyeuchidza kana kuyambira imbwa kuti dzimise maitiro akashata. Pakati pemabasa, vibration uye static kuvhunduka zvine zana magiya ekugadzirisa, ayo anogona kubatsira zvirinani kudzora imbwa maitiro.
PD525 Kudzidzisa Imbwa Kola neRemote inoshandisa inogadziriswa kora tambo yakagadzirwa neTPU zvinhu, zvinoenderana nembwa dzemhando dzakasiyana. Inogona kuzadzikisa mazuva makumi matanhatu ekushandisa uye anopfuura mazuva mazana maviri enguva refu yekumira pasi pesimba rakazara. Kureba kure kure kudzora chinhambwe kunogona kusvika 1090 mayadhi, uye inogona kushandiswa panze.
PD520S Kudzidzisa Imbwa Collar ine Remote inogona kushandiswa kubvisa hunhu husingadiwe hwembwa dzakadai sekuhukura, kusvetuka, kudhonza pane lead, kuchera uye nezvimwe! Sarudzo mbiri dzekugadziriswa: imwe-pa-imwe yakadzidziswa hunyanzvi nekora imwe uye kure kure; iko kugona kwekubatanidza maviri makorari kune kure kure kudzora maitiro eembwa mbiri.
PD520S Kudzidzisa Imbwa Collar ine Remote ine matatu ekudzidzisa mamods: static kuvhunduka, vibration uye kurira. Imwe yeaya matatu mashandiro anotungamirirwa neakasiyana bhatani, uye kune zana akasimba uye asina kusimba nzvimbo dzekugadzirisa mune vibration mode uye static kuvhunduka modhi. Mushure mekuchaja kwemaawa maviri, iyo yekumusoro control inogona kushandiswa kusvika kumazuva zana nemakumi masere, iyo inogashira inogona kushandiswa kusvika kumazuva makumi matanhatu, iyo yakazara nguva yekumira inopfuura mazuva mazana maviri, uye chinhambwe chekudzivirira chinhambwe hachi pfuure 545 mayadhi. Collar tambo inogadziriswa, inokodzera imbwa diki nepakati-saizi.
PD259B Anti Bark Imbwa Collar
PD259B inoshandisa nzira mbiri dzekudzidzisa, yemagetsi kuvhunduka modhi uye isiri-yemagetsi kuvhunduka modhi. Mumagetsi emagetsi modhi, PD259B shandisa chiyeuchidzo chine mutsindo, chiyeuchidzo chekudengenyeka uye yambiro yemagetsi, nepo isiri-static modhi inoshandisa chiyeuchidzo chekudengenyeka chinowedzerwa neyeuchidzo chiyeuchidzo, icho chinogona kumisikidzwa kune dzakasiyana imbwa mamiriro. Uye zvakare, PD259B Anti Bark Imbwa Collar yakashongedzwa nechiratidziro skrini kuti uwane kuona kwekushanda uye kuita kuti kushandiswa kwePDC259B kuve nyore. Iyo yekunzwisisa nhanho inogona zvakare kugadziridzwa zvinoenderana neiyo imbwa yekuhukura kurira. Iyo yekunzwisisa marongero inoona kuti zviri nyore sei kutanga iyo PD259B Anti Bark Imbwa Collar kuti ishande.